विजय शाही वास्तविकता हेर्नुहोस्, मेमोरी किङ विजयको फर्मुला यस्तो, विश्वभर ब्यापक चर्चा ! (हेर्नुहोस भिडियो) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/विजय शाही वास्तविकता हेर्नुहोस्, मेमोरी किङ विजयको फर्मुला यस्तो, विश्वभर ब्यापक चर्चा ! (हेर्नुहोस भिडियो)
विजय शाही वास्तविकता हेर्नुहोस्, मेमोरी किङ विजयको फर्मुला यस्तो, विश्वभर ब्यापक चर्चा ! (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं। विश्व रेकर्ड कायम गरिसकेका कालिकोटका विजय शाहीलाई केही असम्बन्धित ब्यक्तिले झुटो हो भन्दै आरोप लगाएपछि उनले त्यस्ता ब्यक्तिलाई चुनौती दिएका छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफुलाई झुटो भनेर टिप्पणी गर्नेलाई चुनौती दिएका हुन् । शाहीले दर्जनौ सहभागी कार्यक्रममा आफ्नो जादु फेरी देखाएका छन् । ३० सेकेण्डमा १ सय भन्दा बढी शब्द सम्झेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका विजयले केही वेरमै ५० पानाको किताव पनि कण्ठ गर्न सक्छन् । कम्युटरको मेमोरीमा जस्तो आफ्नो दिमागको मेमोरीमा राख्न सक्ने क्षमता भएका विजयलाई आफुले भनेकै बेलामा प्रस्तुती दिएनन् भनेर झुटो भन्दै प्रचार गरिएको थियो।
रिपोर्टस् क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई सम्मानका लागि भन्दै बोलाईएको थियो । सो कार्यक्रममा जाँदा उनले आफुले प्रस्तुती दिनुपर्छ होला भन्ने अनुमान गरेका थिएनन् । त्यो भन्दा अघिल्लो दिन उनी राती २ वजे सम्म एउटा कार्यक्रममा ब्यस्त थिए । थकान र निन्द्राले गर्दा उनले तयारी नगरी कार्यक्रममा गए । तर सम्मानका लागि बोलाएको कार्यक्रममै प्रस्तुती दिन दववा दिइयो । उनले त्यहाँ प्रस्तुी दिएनन् । त्यसपछि उनलाई झुटो भन्दै प्रचार गरियो। विश्वरेकर्ड बनाई सकेका ब्यक्तिलाई झुटो भन्दै गरेको प्रचारले उनी आ’त्तिए । ह’तास हुँदै युट्युवरका घरदैलोमा धाउन थाले।
तर शुक्रवारको एक कार्यक्रममा उनले फेरी दर्जनौ ब्यक्तिका अगाडी आफ्नो प्रस्तुती देखाए । उनले आफुलाई त्यसरी झुटो भनेर दावी गर्नेहरुकै अगाडी कुनै दिन प्रस्तुती दिने बताएका छन् । आफ्ना बारेमा नकारात्मक समाचार बनाउने र भिडियो प्रस्तुत गर्नेहरुसंग अब नबोल्ने उनले बताएका छन् । उनले युट्युवमा यसवारे अन्तरवार्ता नदिने बताएका छन् । भित्र भिडियो अर्कै हुन्छ तर हेडलाईन अर्कै बनाएर हालिन्छ, म अब सबै पत्रकारलाई इन्टरभ्यु दिन्न उनले भनेका छन्।
पैसा कमाउने केही टिप्सःजसले तपाईं रातारात बन्नुहुनेछ धनी
रुसको कोरोना भ्याक्सिनलाई ठूलो झट्का, गम्भीर नैतिक संकटमा फस्यो
अर्जुन विक र छोरालाई साथ दिँदै आइन् यती राम्री युवती [भिडियो सहित]
रोग भन्दा भोकको पिडा: लकडा’उनमा नेपाल फर्केकाहरु पुन: रोजगारी खोज्दै भारत फर्किनेको लर्को